Ranomasina Mediteranea - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mediteranea)
Ny Ranomasina Mediteranea dia ranomasina any atsimo andrefan'i Eorazia, ary ranomasina any avaratr'i Afrika. Ny halavany avy any andrefana hatrany atsinanana dia misy 4 000 km, ary 1 800 km ny halaliny.
Ny ranomasina Mediteranea dia manasaraka ny kontinenta Afrikanina sy ny kontinenta Eoropeanina. Ny andilan-tanin'i Suez fotsiny no ifandraisan'i Afrika sy ny kontinenta Eorazianina. Ny andilan-dranomasin'i Gibraltar dia manasaraka an'i Espaina sy i Afrika Avaratra, 14 km monja ny halaviran'i Afrika Avaratra sy i Eoropa Andrefana.
Ny anarana hoe Mediteranea, izay midika hoe
idika "ranomasina eo anivon'ny arakanny teny niaviany hoe y", na mare medi tera amin'ny teny latina (araka an'i Isidora avy any Sevila tamin'ny taonjao-o faha 7).
Nandritra ny Andro Taloha, ny ranomasina Mediteranea dia lalan'ny sambo sy lalan'ny entam-barotra, ahafahan'ny fifandraisana ara-barotra sy ara-kolontsaina eo amin'ny mponina mipetraka manodidina an'i Mediteranea: ny kolontsain'i Mezôpôtamia, ny an'i Ejipta, ny kolontsaina semitika, persana, fenisianina, kartajinianina, grika ary romana. Ny tantaran'i Mediteranea dia zava-dehibe amin'ny fiaviana sy ny fivoaran'ny haifomba any Andrefana.
Ny salan-kalalin'ny ranomasina Mediteranea dia 1 500 m eo ho eo. Ny faritra lalina indrindra dia ny ranomasina Ionianina (-5 121 m) eo eo amin'ny halon'ny Matapan (aikaikin'ny Pelôpônezy).
Ny halavan'ny morontsiraka dia misy 46 000 km. Ny ranomasina Mediteranea dia misy dobo roa: ny voalohany dia manana velarana 0,85 tapitrisa km2 ary ny faharoa dia manana velarana 1,65 tapitrisa km2.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ranomasina_Mediteranea&oldid=979570"
Dernière modification le 13 Janoary 2020, à 10:44
Voaova farany tamin'ny 13 Janoary 2020 amin'ny 10:44 ity pejy ity.